Ciyaarta Baseball oo ay gooyeen gorgos iyo oscey la dagaallama kalluunka - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA »Ciyaarta kubadda baseball oo ay gooyeen gorgor iyo oscey la dagaallama kalluunka - BGR
Ciyaarta Baseball oo ay gooyeen gorgor iyo oscey la dagaallama kalluunka - BGR
Dadku waxay jecel yihiin in ay raacaan jadwallada sida tusaale ahaan, abaabulida ciyaaraha kubada kolayga, laakiin Hooyo Nacnadu ma daneeyso mashaariicdeena.
Sidaas marka gorgorkii iyo baqii waxay go'aansadeen inay ka hortagaan ka hor kalluunka dhintay ee bartamaha ciyaaraha jaamicadda Jacksonville John Sessions Stadium Sabtidii, ciyaartoyda ayaa ku khasabtay inay dhacaan waxyaabo. Ugu dambeyntiina, shimbirta kuma dhammaato cuntada, laakiin ma ahan sabab la'aan.
Intii lagu guda jiray wareeggii siddeedaad ee jaamicadda Jacksonville State-Jacksonville, waxa la dhex mariyey beerta kalluunka weyn ee cirridka. Shimbirku wuxuu ugu dambeyntii sii daayay kalluunka bartamihii ciyaarta, isla markiiba waxa uu noqday mid cad in sababta uu u daba mariyay daaweynta dhadhan fiican leh.
Xilligaan si aad u xasuusato waligeed taariikhda baseball!
Kalluumeysiga kalluunka ee cirridka ayaa loo hanjabay gantaal balaadhan, taas oo keentay in dawada ay ku tuurto kalluunka ka dambeysa goolka labaad. Kalluunka waxaa lagu soo celiyay boodh oo laga soo qaaday berriga. pic.twitter.com/KF1F5N3GBV
- NCAA Baseball (@NCAACWS) 24 Febraayo 2019
Haa, waa gorgortan aad u ballaaran oo sameynta joogtada ah ee samada ka sareysa garoonka, iyo duufaanku waxay ka baxeen aagga iyagoo caloosha madhan. Muddo yar, waxay u muuqataa in gorgosku isku dayayo inuu kalluunka dib u soo celiyo, laakiin kooxuhu waxay leeyihiin qorshooyin kale.
Xubin shaqaale ah oo ka socda kursiga keydka ayaa ku degdegaya inuu kalluumaysto oo duubo. tuwaal iyo shukumaan ka hor inta aanay gorgortanku dhaqaaqin. Xayeysiiyaha ayaa u muuqda inuu ku riyaaqay goobta isla markaana u digay milkiilaha cusub ee kalluunka in shimbirta laga yaabo inay daawato.
Ciyaartu si dhakhso ah ayey u soo laabatay, labada shimbirna waxaa lagu qasbay in ay ka helaan cunto kale.
KA QAADASHO - Cilmi-baadhayaasha shakiga leh waxay la kulmaan maal-galinta Awood-bixinta NB
Colposcopy: Waa maxay baaritaanka gynaecnaanta jirka?